Resaka fiantohana - Zhejiang Leihao Electric Co., Ltd.
1. Fanoloran-tena momba ny serivisy: manome "garantie roa taona".
1) Ny "garantie roa taona" dia manondro ny fiantohana maimaim-poana sy ny fotoana fanamboarana mandritra ny roa taona voalohany amin'ny fividianana vokatra. Ity fanoloran-tena ity dia ny fanoloran-tenan'ny orinasanay amin'ny mpanjifa dia tsy mitovy amin'ny vanim-potoana fiantohana ny fifanarahana ara-barotra.
2) Ny fetran'ny fiantohana dia voafetra amin'ny mpampiantrano vokatra, karatra interface tsara, fonosana sy tariby isan-karazany, vokatra rindrambaiko, antontan-taratasy ara-teknika ary fitaovana hafa dia tsy voarakotry ny fiantohana.
2. Fiaraha-miasa amin'ny saran'ny fitaterana amin'ny fanamboarana/famerenana ny vokatra:
1) Raha misy olana amin'ny kalitao ao anatin'ny herinandro aorian'ny fividianana ny vokatra, ary tsy misy scratches ny endriny, dia azo soloina mivantana amin'ny vokatra vaovao izany rehefa avy nohamarinin'ny departemantan'ny orinasa aorian'ny varotra;
2) Mandritra ny vanim-potoana fiantohana, ny orinasa dia mandefa ny vokatra aorian'ny fanoloana antoka ho an'ny mpanjifa na mpaninjara;
3) Noho ny olana amin'ny andiany vokatra dia naverin'ny orinasa an-tsitrapo ny fanoloana.
※ Raha mahafeno ny iray amin'ireo fepetra telo voalaza etsy ambony ireo dia ny orinasanay no hitondra ny entana, raha tsy izany dia ny mpanjifa na ny mpivarotra no miantoka ny saran'ny fitaterana.
Ireto toe-javatra manaraka ireto dia tsy voarakotry ny fiantohana maimaim-poana:
1) Ny tsy fametrahana na fampiasana araka izay takian'ny boky fampianarana dia miteraka fahasimban'ny vokatra;
2) Ny vokatra dia nihoatra ny vanim-potoana fiantohana sy ny fotoana fiantohana;
3) Novana na nofafana ny etikety manohitra ny fanodinkodinana vokatra na laharan-tariby;
4) Namboarina na nesorina tsy nahazo alalana avy amin'ny orinasanay ny vokatra;
5) Raha tsy nahazo alalana avy amin'ny orinasanay, ny mpanjifa dia manova tsy misy dikany ny fichier misy azy na ny fahasimban'ny viriosy ary mahatonga ny vokatra tsy hiasa;
6) Ny fahasimbana ateraky ny fitaterana, ny fampidinana sy ny fampidinana entana, sns, eny an-dalana hiverina any amin'ny mpanjifa mba hanamboarana;
7) Ny vokatra dia simba noho ny anton-javatra tsy nahy na ny fihetsiky ny olombelona, ​​toy ny tsy mety ny fidirana malefaka, ny mari-pana ambony, ny rano miditra, mekanika fahasimbana, fahatapahana, mafy oxidation na harafesina ny vokatra, sns .;
8) Simba ny vokatra noho ny hery voajanahary tsy azo toherina toy ny horohoron-tany sy ny afo.